के हाे पिसाब चुहिने समस्या ? | Ratopati
के हाे पिसाब चुहिने समस्या ?
पिसाब चुहिने आमसमस्या हो । सामान्य अवस्थामा पनि पिसाब चुहिरहनुलाई पिसाब चुहिने समस्या भनिन्छ । पिसाबथैलीको रोगका कारण पिसाब चुहिने समस्या हुन्छ । यस्तो समस्या भएमा टुक्रुक्क बस्दा, हाछ्युँ गर्दा वा गह्रुंगोे सामान उठाउँदा पनि पिसाब चुहिने गर्छ । यस्तो समस्या महिलामा बढी हुन्छ । पिसाब चुहिने समस्या पिसाबथैलीको रोग हो ।
पिसाबथैलीले पिसाबलाई होल्ड गर्छ । तर, पिसाबथैलीमा समस्या आएमा पिसाब चुहिने समस्या हुन्छ । ढाड र हाड्डीमा समस्या भएमा पनि यस्तो रोग लाग्छ ।
कहिलेकाहीँ पिसाब निथ्रिन नपाईकन पिसाबथैली बन्द हुन पनि सक्छ । जसले गर्दा पिसाब चुहिने समस्या आउँछ ।
शल्यक्रिया गर्दा पिसाबथैलीमा चोट लागेमा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ । शल्यक्रियाको समयमा पिसाबथैलीवरिपरिका नसा काटिएमा पनि पिसाब चुहिने समस्या हुन्छ ।
बच्चा जन्मेपछि पनि महिलामा पिसाब चुहिने समस्या हुन्छ । बच्चा जन्मेपछि महिलाको यौनांगवरिपरिका भाग लुज हुन्छ र पिसाब चुहिने गर्छ ।